LG G2: Ibudata ma wụnye Remote Ndenye maka Roms AOSP | Gam akporosis
Otu n'ime ihe ndị LG G2 ọrụ chere tupu gbanye AOSP Rom na ngwụcha ya, ọ bụ n'ihi enweghị ndakọrịta nke ngwa dịka igwefoto LG mbụ, ma ọ bụ ntinyeghị n'ụdị a dị ọcha gam akporo Roms, nke ngwa LG nwere dịka Memo ngwa ngwa o Ngwa ngwa ngwa. Kedu ihe ị ga-agwa m ma m gwa gị na ụfọdụ n'ime ngwa ndị a dịka igwefoto mbụ nke LG G2 ma ọ bụ Ndenye Remote, anyị nwere ike iwunye ha na-enweghị nsogbu ọ bụla na ụdị gam akporo ROM dị ọcha, nke na-enye anyị ahụmịhe dị mma karịa nke gam akporo karịa karịa usoro nhazi nke LG?
Na post taa, aga m ekerịta gị niile ụzọ ziri ezi wụnye Remote Remote na LG G2 ọ bụla na AOSP Rom ma ọ bụ dị ọcha gam akporo. A post nke na-agbakwunye nke ọzọ nke m gosipụtara otu esi etinye igwefoto LG G2 mbụ, ka ị ghara ida ọrụ niile nke ngwa LG mbụ na-enye anyị, na ụdị a dị ọcha gam akporo Roms na enweghị akwa nke nhazi site na ndị nrụpụta.
Etu esi wụnye Remote Ndenye na Android AOSP Roms
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ budata faịlụ abịakọrọ na usoro ZIP kwekọrọ na ngwa ahụ Ported LG Quick Remote iji nwee ike ịgbanye na LG G2 na AOSP Roms ma ọ bụ dị ọcha gam akporo. Otu faịlụ agbakọtara na usoro ZIP na anyị ga-e copyomi na mgbọrọgwụ nke ebe nchekwa dị n'ime LG G2, n'agbanyeghị ụdị ma ọ bụ ụdị dị iche iche, ya bụ, ozugbo na usoro ZIP na enweghị decompressing ya.
Ugbu a, anyị ga-enweta mgbake gbanwere, maka nke a, anyị ga-agbanyụ LG G2 kpamkpam ma gbanye ya ọzọ site na ịpị n'otu oge ahụ na ịhapụ ịhapụ, bọtịnụ olu ala plus ike button, mgbe anyị nwere ike ịhụ LG Logo, anyị ga-ahapụ bọtịnụ abụọ ahụ n'otu oge iji pịa ha ozugbo wee jide ha ruo mgbe ihuenyo nke Ntọgharị siri ike. Na ihuenyo a, anyị ga-akwado nnweta na mgbake gbanwetụrụ ịpị bọtịnụ Ike ugboro abụọ ma ọ bụ na
Ozugbo anyị ga-abanye nhọrọ ahụ wụnye na ịnyagharịa na mbụ ebudatara Ndenye Remote zip ma gosi na nwụnye nke ngwa nke ga-eje ozi dị ka eluigwe na ala maka igwe onyonyo, akụrụngwa egwu, DTT na ụdị igwe elektrọnik dakọtara.
Site na nkuzi a na ndị ọzọ akọwabula, dịka ntinye nke igwefoto LG mbụ, anyị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ maka enweghị abụghị ndakọrịta na mbụ LG ngwa. Fọdụ nkuzi ma ọ bụ ngwa anyị ga-enwe ike ịnye ngwa dịka LG Ndenye Memo nke bụ ngwa ọzọ na-adọrọ mmasị nke ọtụtụ ndị ọrụ LG G2 adịghị njikere ịfu site na imelite ụdị ndị a dị ọcha nke gam akporo.
Mgbe ahụ m ga-ahapụrụ gị njikọ nke nkuzi ma ọ bụ ngwa ngwa ga-enyere anyị aka megidere ndakọrịta ya na ngwa dika LG Ndenye Memo:
SketchBook, budata Samsung Galaxy Note 3 ndetu ngwa ugbu a maka ndị ọzọ gam akporo ọnụ. - Nke a na-aga karia ime maka LG's Quick Memo.
Ngwa ngwa Android dị egwu: Detuo Afụ Taa. - Nke a na-aga Mgbakwunye na clipboard LG na otutu nnomi ya.
Budata igwefoto LG G2 iji wụnye ya na AOSP Roms. - Nke a na-aga wụnye igwefoto mbụ nke LG G2 anyị.
Budata - Ngwa ngwa Remote.zip, mirror
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G2: Etu ibudata ma wụnye Remote Ndenye na Android AOSP Roms dị ọcha
Emmanuel Perez dijo
na-arụ ọrụ maka g2 mini?
Zaghachi Emanuel Perez
Etinyere m ya na mini s4 mana awụnyere ngwa ahụ anaghị enye m ohere ijikọ ya na lg TV, kedụ ihe ọ ga-abụ?
Alexander Beato dijo
Ndewo Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na nke a, m nwekwara ike ịgbanwe ntụ oyi ebe ọ bụ na na mbido nke mbụ ngwa ngwa nke g2 pụtara na foto nke abụọ nke g3 na nke g3 anaghị eweta ọrụ maka ntụ oyi ekele
Zaghachi Alexander Beato
Jose grillet dijo
ezi m chọrọ ịmata ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọ bụla iji ngwa ngwa remote na ụfọdụ ndị ọzọ android ọnụ?
Zaghachi Jose Grillet
Alejandro Diaz Seville dijo
LG G3 Quick Remote nwere ọrụ ikuku ikuku, enwere m nke m ma jiri ya na-arụ ọrụ ikuku. Echiche kacha mma.
Zaghachi Alejandro Díaz Sevilla
ọ gaghị ekwe ka m budata zip ahụ, ọ na-eduga m na peeji ahụ mana ọ naghị ebudata
Ọ naghị arụ ọrụ, mgbe flahshear gachara mgbe ị na-agbanye ekwentị, ịdọ aka ná ntị na-aga n'ihu na ngwa ngwa ngwa na-akwụsị ozugbo malitere ịpụta. Onwere onye ga enyem osisa m?
Daniel Pena dijo
na cm12 Akwụsịrị m nwa oge, emesia m daa, na blisspop ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ maka ugbu a
Zaghachi Daniel Peña
Nnọọ…. Enwetara m g3 ma ọ nweghị ike ịchịkwa ikuku na ihe ọzọ! N'ihi na ngwa ndị ọzọ na-abụghị ngwa ngwa ime ime anaghị arụ ọrụ na kọmputa a. Daalụ na m ga-enwe ekele maka azịza gị.
Ebee ka m ga-ebudata ngwa ahụ?
Ndewo, kedu ka ị mere ?, Enwere m lg g2 d802 na usoro ọmụmụ 14.1 7.1.1, ọ ga-amasị m ịnweta ngwa ngwa dịpụrụ adịpụ nke m nwere site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebee ka m ga-ahụ ya? Ana m echere azịza gị, ekele!
Ihe oyiyi ọhụrụ na njirimara teknụzụ nke Oppo N3
5 dị mkpa Android Wear ngwa maka smartwatch ma ọ bụ smartwatch gị